Google Play Games izao mamela anao hanoratra kilalao sy hizara azy ireo | Androidsis
Google dia lalao variana amin'ny Android, ary azo antoka fa ity dia iray amin'ireo endrika hanomezana ny fitiavana be indrindra amin'ny volana ho avy, ary maninona raha tsy, amin'ny kinova Android ho avy. Raha efa tafahoatra ianao ny hatsaran'ny sary izay nandrasana hatry ny ela tao amin'ny fitaovany Nexus, ankehitriny dia ady hafa iray izay nanapahan'i Apple lalao video amin'ny iPhone sy iPad-ny hatrany.
Ny fironana amin'ny lamaody dia lalao mivantana ary ireo YouTubers mamela anao hanakaiky kokoa ny hevitr'izy ireo mampihomehy, mandritra ny fitsapana ny hatsaran'ny lalao video mafana indrindra, na milaza fikajiana lehibe ho an'ireo izay nahavita nanova kely ny endrik'ilay sokajy toa an'io dia hatramin'izao Minecraft. Nanomboka androany Google dia nanetsika ny fahafaha-manao firaketana sy mizara ny lalaoo amin'ny Google Play Games.
1 144.000 miliara minitra
2 Mizarà mora foana ny lalaoo
144.000 miliara minitra
Mba hanambarana an'ity zava-baovao ity izay midika hoe afaka manoratra sy mizara lalao amin'ny alàlan'ny Google Play Games, Google dia nanolotra avy amin'ny bilaoginy angona tena mahavariana satria misy 144.000 tapitrisa minitra mahery ny horonan-tsarimihetsika video sy streaming mivantana naverina navoaka avy amin'ny YouTube. Ny fantsona toa an'i VanossGaming sy TobyGames dia efa ampahany amin'ny kolontsaina pop ary tompon'andraikitra amin'ireo famerenam-bola an-tapitrisany eran'izao tontolo izao, tarehimarika izay omentsika bebe kokoa amin'ireo tarehimarika fampisehoana sy olo-malaza.
Ary na dia tsy maneho hevitra momba izany aza i Google, Twitch no manome azy rehetra mba ho sehatra streaming izay eSports amin'ny firoboroboany rehetra ary izany dia maminavina ny ho avy lehibe iray izay ahafahan'ny mpilalao baolina kitra hosoloina kintana filalaovana mandritra ny folo taona ho avy.
Mizarà mora foana ny lalaoo
Raha hametraka izany tena mora, Google dia manolotra fomba tena tsotra avy amin'ny fampiharana Google Play Games anao mba hizarana ireo lalao ireo amin'ny olona ifandraisana na olona ao amin'ny fianakavianao. Tsy maintsy manokatra ny app ianao, misafidy ny lalao tianao hilalaovana, ary avy eo dia tsindrio fotsiny ny bokotra firaketana.
Azo atao izany alaivo ny efijery amin'ny 720p na 480p ary mifidiana horonan-tsary momba ny tenanao sy ireo fanehoan-kevitra amin'ny alàlan'ny fakantsary eo aloha, izay hanome ranom-boankazo bebe kokoa an'io horonan-tsary izay halefanay avy eo amin'ny YouTube io. Alohan'ny hahatratrarantsika ity dingana ity dia afaka manitsy azy haingana isika mba hananantsika ireo fitaovana fototra rehetra.
Ireo fitaovana ireo dia manome ny fahafaha-mizara lalao amin'ireo lalao video tsy tambo isaina izay matetika no entinay manaraka ireo andalana ireo mba hahafantaranao ny tsara indrindra amin'ny Android. Efa fantatsika fa Clash of Clans, fa misy foana ny mety manandrana vaovao toa an'i Agar.io, na maninona no tsy, Minecraft tonga amin'ity kinova ity Tantara Mode izay lasa mihamaro hatrany toa ny kinova PC-nao.
Ity endri-javatra vaovao ity manatevin-daharana ny fampiharana YouTube Gaming izay nanomboka ny hazakazaka mba hanakaiky kokoa an'i Twitch avy amin'i Google. Ankehitriny dia atolotra antsika ny fahafaha-manao bebe kokoa sy ny fomba hahafahantsika manome ny zava-drehetra amin'izany lalao video streaming izany, izay eo amin'ny sehatra finday izay mbola misy faritany maro azo zahana. Tsy hoe miatrika ilay hazakazaka volamena isika, fa iza no mahalala hoe aiza no azontsika haleha amin'ireo lalao zarainay amin'ny alàlan'ny fantsona YouTube anay ireo.
Amin'izao fotoana izao io fampiasa io dia misy ho an'ireo mpampiasa izay dia any Etazonia sy Fanjakana Mitambatra. Ho an'ny hafa, mila miandry kely isika vao afaka mirakitra lalao ary mizara izany amin'ny alàlan'ny YouTube. Faharetana kely, raha mbola afa-po amin'ny YouTube Gaming ary ny fahaizany mandefa lalao amin'ilay APK izay mamela anao hiditra raha atao ofisialy ny fandefasana, iray amin'ireo fahagagana mahafinaritra ihany koa tao anatin'izay roa volana lasa izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Tsy ho ela ianao dia afaka manoratra sy mizara ny lalaoo amin'ny Google Play Games